भोजराज कार्की सोलु एफ एम, ४ असोज सोलुखुम्बुको पावैमा जन्मनुभएका गायक गौतम सागर राईको नयाँ गितको चाडै बजारमा आउने भएको छ । भेटौला है साईली शुक्रबारे सोताङ बजार बोलको गीत रेकर्ड सकिएर मिक्सिङको काम भईरहेको गायक गौतम सागर राईले जानकारी दिनुभयो । पुर्वेलि गित संगितमा जिल्लामै पहिलोपटक पाईला चाल्नुभएका गायक राईले चार बर्ष पछि नयाँ गित बजारमा ल्याउन लाग्नुभएको हो ।...
सोलुखुम्बुको प्रकृतिलाई यसरी बर्णन गर्छिन् आङ्ङिमा ।
सोलु एफ एम, बैशाख ११, गायक तथा रचनाकार आङ्ङिमा शेर्पा (कुङ्गा)को शेर्पा भाषामा रहेको नयाँ गीत स्याब्रु बजारमा आएको छ । रचनाकार तथा निर्देशक समेत रहनुभएकी शेर्पाको उक्त गीत आज एक कार्यक्रमका बीच सार्वजानिक गरिएको हो । उक्त स्याब्रु गीतमार्फत प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई शेर्पा भाषामा बर्णन गरिएको छ । सोलुखुम्बु जिल्लाको अधिकांश प्राकृतिक सम्पदा सगरमाथा सहित विभिन्न...
प्रेम पत्र लेखन प्रतियोगिता २०७४ मा सोलुखुम्बु सल्यानका पराजुली विजेता
रेडियो कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छ ले आयोजना गरेको प्रेम पत्र लेखन प्रतियोगिता २०७४ मा प्रेम पत्र लेख्दै विजेता बन्नुभएको सोलुखुम्बु सल्यानका भुपेन्द्र पराजुलीलाई हार्दिक बधाई छ । विशेष साथीको बारेमा बयान गर्न स्रोताको टेलिफोन मार्फत सहभागिता हुने कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छ ले प्रणय दिवसको अवसरमा प्रेम पत्र लेखन प्रतियोगिता गरेको हो । जस्मा १० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।...
सोलुखुम्बु गाएन स्टार सिजन दुईको फाइनल फेरी स¥यो, अब पुस २० र २१ गते हुने ।
पुस ५, २०७४ सोलु एफ एम, सोलुखुृम्बु सोलुखुम्बु गाएन स्टार सिजन २ को फाइनल फेरी सरेको छ । २ पटक सरेर प्रतियोगिता पौष २० र २१ गते हुने भएको हो । फ्रेण्डशिप युथ क्लव केन्द्रिय कार्यालय सोलुखुम्बुको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको फाइनल राउण्डका लागि टप सेभन प्रतियोगिहरु व्यग्र प्रतिक्षमा रहेका छन् । क्लवका अध्यक्ष महेश किरातीले व्यस्तताकै कारण प्रतियोगिता...
सकियो हैट र मंगलीको ‘मट्टिमाला’को सुटिङ
काठमाडौं, काभ्रे, सिन्धुलीगढी, कुलेखानी लगायतका ठाउँहरुमा छायांकन गरेको चलचित्र ‘मट्टिमाला’ को छायांकन सकिएको छ । कलाकार बुद्धि तामाङ र रजनी गुरुङको मुख्य भुमिका रहेको चलचित्रले सिन्धुली गढीमा चलचित्रको एक गीतको छायांकन गर्दै छायांकनको सम्पुर्ण काम सकेको चलचित्रका निर्देशक टेके पौरखी राईले जानकारी दिएका छन् । गाउँ र शहरको जीवनयापनमा आउने फरक र युद्धलाई बोलेको...
२० मंसिर – अभिनेता आर्यन सिग्देलकी श्रीमती सपना भण्डारी मंगलबारदेखि २८ वर्षमा प्रवेश गरेकी छिन् । सपनाको जन्म २०४६ साल मंसिर १९ गते गोकर्णमा भएको हो । सपनाले हरेक जन्मदिन विशेष रुपले मनाउँदै आएकी छिन् । उनको परिवारले उनलाई हरेक वर्षको जन्मदिनमा स्पेशल महसुस गराउने गरेको छ । यसै कारण पनि उनी जीवनका हरेक जन्मदिन बिर्सनै नसक्ने भएर रहेको बताउँछिन् । यस पटकको जन्मदिनमा...
राजबल्लभको बिवाहको पार्टीमा देखिए मुकेस देखी नन्दितासम्म
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित नायक राजबल्लभ कोईराला यतिबेला अमेरिकामा छन् । केहिमहिना अघि झापा स्थायी घर भएकी प्रेमिका प्रतिमा बिमलीसँग औँठी साटेको उनले गत आईतबार अमेरिकाको डालसमा बिवाह गरेका छन् । बिवाहको भोलिपल्ट भएको रिसेप्सन पार्टीमा राजबल्लभका आफन्त तथा चलचित्र क्षेत्रका केहि ब्यक्तित्वहरुको पनि उपस्थिती रहेको थियो । डालसमै सम्पन्न रिसेप्सन पार्टीमा...
हास्यकलाकार केदार घिमिरे(माग्ने बुढा) नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई भोट माग्न चितवन पुगेका छन् । विभिन्न कार्यक्रम र सामाजिक सञ्जालमा बाम एकताको समर्थन गर्दै आएका केदार चितवनको माडीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बाम गठबन्धनलाई समर्थन गर्न पुगका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै केदारले बाम एकताको कारणले आफुलाई खुशी मिलेको बताएका छन् । ‘म यहाँ कुनै...
कस्तो होला ऋचाको कमब्याक ?
म्युजिक भिडियो मोडलिङमा रमाइरहेका बेला विकास आचार्यले नाईं नभन्नु लमा हिरोइन बनाए, ऋचा सिंह ठकुरीलाई । चल्तीका स्टार जीवन लुईंटेलसँग स्क्रिन सेयर गर्न पाउँदा उनको खुसीको ग्राफ अझ माथि उक्लेको थियो । त्यसमाथि फिल्म व्यावसायिक रुपमा हिट पनि भयो । त्यसपछि त के चाहियो र, ऋचाले भटाभट फिल्म खेलिन् । मनमनै मन पराएँ, माया गर ल, खुड्किलो, म तिम्रै भइसकेँ आदि–आदि । तर, दुर्भाग्य १ कुनै...
कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता सीताराम कट्टेल उर्फ धुर्मुस र कुन्जना घिमिरे उर्फ सुन्तली मंसिर १४ गते विवाह बन्धनमा बाँधिएको ९ वर्ष पूरा भएको छ । रौतहटको सन्तुपुर बस्ती निर्माणमा सक्रिय रहेका यी दुईले १० औँ वैवाहिक वर्षगाँठ त्यही बस्तीमै मनाउने भएका छन् । उनीहरुको वैवाहिक वर्षगाँठ पारेर आज हामीले उनीहरुको विवाह कसरी हुनपुग्यो ? त्यस विषयमा एक सामग्री तयार पारेका छौँ ।...
सुरु हुदैँ ‘खोटाङ आइडल’
१५ मंसिर–मोफसलमा लुकेर रहेका गायन प्रतिभाको खोजी गर्ने उदेश्यले खोटाङमा गायन प्रतियोगिता ‘खोटाङ आइडल’को तयारी गरिएको छ । जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानीस्थित परिवर्तन नेपालको आयोजनामा दुई नगर र ८ गाउँपालिकामै पुगेर गायन प्रतिभाहरुको खोजी, पहिचान तथा छनौट गर्ने तयारी गरिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराईएको छ । बिहिबार सदरमुकाममा रहेको...
बैशाखमा आउँदै ‘डमरुको डण्डीबियो’
खगेन्द्र लामिछानेको कथा तथा अभिनय रहेको चलचित्र ‘डमरुको डण्डीबियो’ बैशाखमा प्रदर्शन हुने भएको छ । टुकी आर्टसको ब्यानरमा बनेको चलचित्रको छायांकनको काम सकिईसकेको छ । सम्पादनमा रहेको चलचित्रलाई बैशाखमा रिलिज गर्ने तयारी भईरहेको बुझिएको छ । प्रितम पाण्डेले सम्पादन गरिरहेको यस फिल्मलाई छेतेन गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् । लोप हुदै गएको खेल डण्डीबियोलाई मुख्य विषय...
नायिका प्रियंका कार्कीले सामाजिक संजालमा चलिरहेको रमिता बन्द गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । फेसबुकमा एक स्टाटस राख्दै नायिका प्रियंका कार्कीले आफ्नो काममा ध्यान दिज र रमिता आजैबाट बन्द गर्न सबैलाई अनुरोध गरेकी छिन् । पढौँ उनको स्टाटसः म आफ्नो गल्ती स्विकार्न कहिल्यै नहिचकिचाउने मान्छे, यो सबै ‘stupidity’ मा आफ्नो सहभागिताको बारे सोच्दा मलाई पक्कै पनि दुख लागेकोछ। म कर्ममा...
‘उनी र म’ लिएर आउँदै धुर्मुस–सुन्तली
सामाजिक काममा सक्रिय हास्यकलाकार तथा समाजसेवी सिताराम कट्टेल(धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे(सुन्तली)ले नयाँ गित लिएर आउने भएका छन् । चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने तयारीको साथमा सुबिहानी फिल्म्सले गीतको दुई पोस्टर सार्वजनिक गरेको छ । राजेशपायल राई र अञ्जु पन्तको स्वर रहने गीतमा दिनेश थपलियाको शब्दरचना र अहिलेका चर्चित संगीतकार अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको छ । हरिस निरौला...
चैतमा आउने भयो साम्राज्ञीको ‘तिमी सँग’
पछिल्लो सयमकी चर्चित र ब्यस्त नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको तेश्रो चलत्रिच ‘तिमी सँग’को प्रदर्शनम मिती पक्का भएको छ । चलचित्रका निर्माता तथा निर्देशक शिशिर राणाका अनुसार चलचित्र ‘तिमी सँग’ अब चैत्र २३ गते प्रदर्शन हुने भएको छ । अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा छायांकन सक्काईएको यो फिल्मको अहिले प्रोस्ट प्रोडक्सनको कामहरु भइरहेको छ । चलचित्रलाई यसअघि नै...